कोरोनाभाइरसको उपचार र बचावको लागि प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना उपचार र कोरोनाभाइरस को रोकथाम को लागी प्रार्थना
उपचार र कोरोनाभाइरस को रोकथाम को लागी प्रार्थना
एक्सोडस 15: 26
“तब उनले भने, 'यदि तैंले परमप्रभु आफ्नो ईश्वर होशियारीसित सुन्नु पर्छ अनि उचित कामहरू गर्नुपर्छ भने, र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेछु र मेरा सबै आज्ञा पालन गर्नेछौ भने म यी कुनै पनि रोग लिने छैन। मैले तिमीहरुलाई मिश्र देश लिएर आएँ। म परमप्रभु हुँ जसले तिमीलाई निको पार्छ। ”
यस्तो समयमा, हामी सबैलाई भावना र हाम्रा सबै भिन्नताहरूलाई एकातिर राख्नुपर्दछ र उत्तम संसारको लागि प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ, कोरोना भाइरसको पासोबाट मुक्त संसार हो। हाम्रो जमिन भाइरसबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले कोरोनाभाइरसको उपचार र रोकथामको लागि प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वर हाम्रो हितको बारेमा धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ; उनको योजनाहरू सम्पूर्ण संसारलाई घातक र असाध्यै महामारीको शिकार बनाउन होइन। यो स्पष्टतया शैतानको काम हो किनकि भगवानले कहिल्यै कुनै खराबी गर्नुहुन्न। जबकि विश्वभरका वैज्ञानिकहरू यसको उपचार पाउन बिहान चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका छन् रोग यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी आध्यात्मिकताको कोरीडोरमा पनि परिस्थितिलाई जोगाउन यथाशक्य गर्छौं। हामी प्रार्थनामा जानुभन्दा पहिले भाइरसको बारेमा थोरै वा केही ज्ञान नभएकाहरूको फाइदाको लागि, यो निर्दोष छ कि हामी यसको बारेमा लेख्छौं कि यो कति घातक छ भनेर जान्नको लागि ताकि तपाईं कसरी प्रार्थना राम्रोसँग जान्न सक्नुहुन्छ।
कोरोनाभाइरसको प्रकोप सबैभन्दा भर्खरको र सबैभन्दा घातक महामारी हो जसले संसारलाई आक्रमण गरेको छ जुन संसारले अहिलेसम्म देखेको छैन। यो पहिलो चोटि २०१ December को डिसेम्बरमा चीनको गणतन्त्रको एउटा शहर वुहानमा पत्ता लागेको थियो। सुरुमा, जब भाइरस चीनमा शुरू भयो, बाँकी संसारले अन्धा आँखा र बहिरा कानहरू मोडे, यो युरोपमा सार्न नसकेसम्म। , अफ्रीका, अमेरिका र बाँकी
तीन महिनाभित्रमा १०० भन्दा बढी देशहरू भाइरसबाट धेरै प्रभावित भएका छन् र 100००० भन्दा बढी मानिस मरेको घोषणा गरिएको छ। पश्चिमी संसारमा भाइरस प्रशस्त मात्रामा फस्टाउँदा अफ्रिकामा हाम्रो डर बढ्छ। र अब, घातक भाइरसको कारण विश्वभर खेल गतिविधिहरू एक बन्दमा राखिएको छ। साथै, विश्वव्यापी धेरै व्यापार केन्द्रहरु को प्रकोप को कारण व्यापार बन्द गरीएको छ।
कोरोवाइरस रोगलाई COVID-19 को रूपमा पनि चिनिन्छ हल्का लक्षणहरूले देखाउँदछ। यस रोगबाट संक्रमित व्यक्तिहरूले निम्नको अनुभव लिन सक्दछन्।
कठिनाई सास फेर्ने समस्या (गम्भीर मामलाहरू)
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले अझै भाइरसको उपचार खोज्नको लागि संघर्ष गरिरहँदा आफूलाई भाइरस संकुचन हुनबाट जोगाउनको लागि केही सुझावहरू दियो।
कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि चरणहरू पढ्नुहोस्
नियमित रूपमा र राम्ररी साबुन र पानीले आफ्ना हातहरू धुनुहोस्, र रक्सीमा आधारित हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्।
कम्तिमा १ र आधा मिटर (feet फिट) दूरी आफैं र जो कोही खोक्रा वा छींकनेको बीचमा राख्नुहोस्।
लगातार खोकी वा छींक लागेका व्यक्तिहरू घरमा बस्नुपर्दछ वा सामाजिक दूरी राख्नुपर्दछ, तर भीडमा नमिल्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं र वरपरका व्यक्तिहरू, राम्रो श्वासप्रश्वासको स्वच्छता अनुसरण गर्नुहोस्, मतलब तपाईंको मुख र नाक टिसूले वा तपाईंको आस्तीनमा मोडिएको कुहिनो वा टिश्युमा छोड्नुहोस् जब तपाईं खान्की वा छींक गर्नुहुन्छ। त्यसोभए तुरुन्त प्रयोग गरिएको टिशूको डिस्पोजल गर्नुहोस्।
यदि तपाई ज्वरो, खोकी, र सास फेर्न कठिनाई जस्ता लक्षणहरुबाट अस्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ भने घरमै बस्नुहोस्। मार्गदर्शनको लागि कृपया तपाईंको देशमा मेडिकल इमरजेन्सी टोल फ्री नम्बर कल गर्नुहोस् जुन रात दिन उपलब्ध छ। स्वयं औषधीमा संलग्न नहुनुहोस्
जब हामी भाइरसको बारेमा पर्याप्त जानकारी संग आफैलाई सुसज्जित गर्छौं, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि भगवानले भूमिलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, उसले कोभिड १ of को प्रभावलाई हटाउन र विश्वमा शान्ति पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
हामी केको लागि प्रार्थना गर्छौं?
जब हामी प्रार्थनामा परमेश्वरलाई पुकार्छौं, हामीले निम्न क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ र प्रभुबाट छिटो जवाफको आशा गर्नु पर्छ।
प्रसार गर्न रोक्नको लागि
भाइरस हर्माट्टनमा जंगलमा आगोको भुँडीमा फैलिंदैछ र यदि यो जारी रह्यो भने, संसारको कुनै पनि कुना बचत हुनेछैन। त्यहाँ प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ कि भगवानले भाइरसलाई थप फैलिनबाट रोक्नुहोस्। चिकित्सा चिकित्सकहरूको ज्ञान असक्षम साबित भएकोले, यसको रोकथामका सबै उपायहरू विफल साबित भएका छन, के हामी प्रार्थनामा परमेश्वरतर्फ फर्कन्छौं भनेर समय आउँदैन र? हामी भाइरसको विस्तार रोक्नको लागि प्रार्थना गर्दछौं, भाइरसले यसको शक्ति गुमाउनुपर्दछ। दर जसमा भाइरस फैलिरहेको खतरनाक छ, एक संक्रमित व्यक्ति भाईरसको साथ कुनै पनि सम्पर्क प्रसारित हुनेछ। अचम्ममा पर्दैन, यो युरोपमा विशेष गरी फुटबल र व्यापार साम्राज्यको संसारमा लगभग अनियन्त्रित हुँदै गइरहेको छ। परमेश्वर सर्वोच्च प्राणी हुनुहुन्छ, उहाँ सबै कुरामाथि अधिकार गर्नुहुन्छ, र कोरोनाभाइरसलाई निको पार्ने र बचावको हाम्रो प्रार्थनाले परमेश्वरलाई यसमा रोक्न सक्दछ।
भगवान हाम्रो डाक्टर समाधान दिन को लागी
साथै, हामी प्रार्थना गर्दैछौं कि परमेश्वरले डाक्टरहरू र वैज्ञानिकहरूलाई एक बिरामीको उपचार गर्न आउने ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्। अहिले सम्म, त्यहाँ भाइरसको कारण के हुन सक्छ भनेर ठोस प्रमाणहरूको एक टुक्रा गरिएको छैन, यो सिर्फ निलो देखि फैलियो। धर्मशास्त्रले हामीलाई बुझाउँदछ कि हरेक राम्रो विचार परमेश्वरबाट आउँदछ, हामी प्रार्थना गर्नेछौं कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई एक बिरामीको साथ आउने बुद्धि दिनुहोस्।
मृत्यु टोल रोक्न को लागी
मृत्यु हुनेको संख्या तीन महिनामा एकदेखि बढेर 4000००० सम्म बढेको छ र यदि ध्यान दिएन भने यो बढि बढ्नेछ। हाम्रो प्रार्थनाले मृत्युको सoll्ख्यालाई कुनै बृद्धि गर्नबाट रोक्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। एउटा शहरमा सुरु भएको भाइरस १०० भन्दा बढी देशहरूमा विस्तार भइसकेको छ, मृत्युको स stop्ख्या रोकिनु पर्छ र भाइरसले सफलतापूर्वक हामी सबैलाई मार्छ र त्यहाँ प्रार्थना गर्ने कोही पनि हुँदैन, के तपाईं सल्लाह दिनुहुन्न कि हामी अहिले प्रार्थना गरिरहेका छौं कि हामी अझै छौं? जिउँदो
विश्वव्यापी रूपमा सबै संक्रमित बिरामीहरूको छिटो रिकभरीको लागि
१ 144,078,०70,920। भन्दा कम व्यक्तिहरू भाइरस स infected्क्रमित भएका XNUMX०,XNUMX२० भन्दा बढी निको भइसकेका छन् र बाँकी अझै भाइरससँग संघर्ष गरिरहेका छन्। प्रार्थना गर्दा, हामीले भाइरसबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ कि भगवान आफैले तिनीहरूलाई निको पार्नुहोस्। बाइबलले हामीलाई यो बुझाउँदछ कि परमेश्वर एक शक्तिशाली निको पार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो हात फैलाउन सक्नुहुन्छ र एक सेकेन्डमा लाखौं मानिसहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। भाइरसबाट मर्ने धेरै व्यक्तिहरू, हामी भाइरसबाट प्रभावित भएका सबैलाई निको पार्दै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेका छौं।
ईन्फिकेटेडको लागि ईश्वरीय सुरक्षाको लागि
कोरोनाभाइरसको उपचार र रोकथामको लागि प्रार्थना गर्दा, हामीले यो पनि प्रार्थना गर्नैपर्दछ कि भाइरस संक्रमित हुनबाट स infected्क्रमित नभएकाहरूलाई परमेश्वरले बचाउनुहुनेछ। हामी भाइरस बिरूद्ध सुदृढीकरणका रूपमा काम गरिरहेका छौं एक मात्र तरीका यो हो किनकि हामी अहिलेसम्म यसबाट प्रभावित भएका छैनौं। हामीले प्रार्थना गर्नै पर्छ कि जब ईश्वरले भाइरसलाई थप फैलिनबाट रोकिरहेको छ र प्रभावितहरूलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ भने, सुरक्षाको हात उहाँमा हुनु पर्दछ जो अझै प्रभावित छैनन्।
धर्मशास्त्रले भन्छ कि हामी ख्रीष्टको छाप बोक्न कसैलाई पनि नपरोस्। हामीले प्रार्थना गर्नै पर्छ कि परमेश्वरका हातहरू हामी प्रत्येकमा रहोस् र भाइरसबाट हामीलाई जोगाउनुहोस्।
हे प्रभु प्रभु, हामी येशूको नाममा कोरोनाभाइरसको सबै शक्तिको बिरूद्ध आउँछौं
हामी प्रार्थना गर्छौं कि भाइरसले येशूको नाममा यसको शक्ति गुमाउनेछ
हामी येशूको नाममा संसारमा कोरोनाभाइरसको सबै गढ नष्ट गर्दछौं।
प्रभु, हामी तपाईको शक्तिले तपाईलाई येशूको नाममा भाइरसको फैलावट रोक्न चाहन्छौं।
प्रभु, तपाईंको करुणाले, हामी तपाईलाई भन्छौं कि तपाईले सम्पूर्ण संसार भरिका मेडिकल टिमलाई येशूको नाममा निको पार्न आउनुहुनेछ।
स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौं कि तपाईको शक्तिले तपाईले येशुको नाममा यस घातक महामारीको कारण उजागर गर्नुभयो।
धर्मशास्त्रले भन्छ कि हरेक राम्रो विचार तपाईको प्रभुबाट आउँदछ, हामी तपाईलाई बिन्ती गर्दछौं कि तपाईले उसलाई येशूको नाममा निको पार्ने उपाय दिनुहुनेछ।
हे प्रभु, हामी तपाईको येशूको नाममा भाइरसको मृत्यु हुने संख्या रोक्नको लागि प्रार्थना गर्दछौं।
स्वर्गमा बस्ने पिता, हामी तपाईको शक्तिले तपाईको शक्तिलाई येशूको नाममा बढ्नबाट रोक्छौं भनेर सोध्छौं।
कोरोनाभाइरस को सबै शक्ति येशूको नाममा नष्ट गरीन्छ
हामी लापरवाह छौं यदि यो भाइरस हो वा यो शैतान, यहोवा, द्वारा आर्कस्ट्रेट गरिएको थियो, हामी तपाईंलाई येशूको नाममा संसारलाई निको पार्छौं भनेर सोध्छौं।
किनकि यस्तो लेखिएको छ कि ख्रीष्टले हाम्रा सबै रोगहरू आफैंमा लिनुभयो र हाम्रा सबै रोगहरू उहाँले निको पार्नुभयो। हामी हाम्रो निको पार्छ येशूको नाम मा हुन।
हामी भाइरस को सफा संग मारिएको छ कि संसार भर मा प्रत्येक पुरुष र महिलाको लागि प्रार्थना, हामी तपाईलाई येशूको नाम मा निको पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना।
बाइबल भन्छ हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो, त्यसकारण, अनैतिकता केहि हामी मा एक ठाउँ पाउन सक्छ। हामी येशूको नाममा तिनीहरूको शरीरमा भाइरसको बिरूद्ध आउँछौं।
किनकि यस्तो लेखिएको छ, अपरिचित मानिसहरू डराउनेछन् र लुक्नेछन्। हामी कोरोनाभाइरसलाई येशूको नाममा प्रभावित व्यक्तिहरूको शरीरबाट बाहिर निस्कन आदेश दिन्छौं।
स्वर्गको अधिकारबाट हामी घोषणा गर्दछौं कि अन्तमा येशूको नाममा संसारमा कोरोनाभाइरसको आगमन भयो।
कोरोनाभाइरसको हरेक दानव येशूको नाममा आगोले नष्ट हुन्छ।
हामी फरमान गर्दछौं कि येशूको नाममा, मुक्ति दिनुहुने परमेश्वरको अधिकार, येशूको नाममा घातक सिन्ड्रोमले असर गर्ने प्रत्येक पुरुष र महिलामा राख्नुपर्दछ।
किनकि यो लेखिएको छ, हामी ख्रीष्टको छाप बोक्छौं, कोही पनि हामीलाई दिक्क नदेओ। हामी येशूको नाममा कोरोनाभाइरसबाट स्वतन्त्रता घोषणा गर्दछौं।
हे प्रभु येशू, हामी तपाईलाई स्वर्गबाट ​​पृथ्वीमा हेरेर हेर्नेछौं र तपाईंले येशूको नाममा हाम्रो देशलाई निको पार्नुहुनेछ भनेर हामी सोध्छौं।
बाइबलले भन्छ कि उसको चट्टानबाट हामी निको भयौं, हामी येशूको नाममा हाम्रो च dec्गाइको घोषणा गर्दछौं।
हामी हाम्रो मुक्ति वास्तविकतामा येशूको नाममा बोल्छौं।
हे बुबा, हामी तपाईंलाई कोरोनाभाइरसको स्रोतमा जान्छौं र तपाईंले येशूको नाममा यसको शक्तिको जराबाट विनाश गर्नुहुनेछ।
हे प्रभु, हामी आदेश दिन्छौं कि येशूको नाममा कोरोनाभाइरसको कारण अब मृत्यु हुनेछैन।
हामी आदेश दिन्छौं कि भाइरसको अब येशूको नाममा मानिसहरुको जीवन मा शक्ति छैन।
यो लेखिएको छ कि तपाईं हाम्रो लागि तपाईंको विचारहरू जान्नुहुन्छ, यी असल विचारहरू हुन् न बुराउनेको लागि ताकि हामीलाई आशा गरिएको अन्त होस्। हामी घोषणा गर्दछौं कि कोरोनाभाइरस येशूको नाममा हामी माथि अधिकार गर्ने छैन।
यो लेखिएको छ, यदि कोही बोल्छ भने, तिनीहरू परमेश्वरको वचन जस्तो बोल्दछन्, हामी हाम्रो विश्वासमा सामेल हुन्छौं र हामी सबैलाई समान आदेश दिन्छौं कि भाइरसको शक्ति येशूको नाममा हराउनेछ।
हामी हाम्रो नाममा येशूको नाममा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको निको पार्ने काम गर्दछौं।
हामी आदेश गर्दछौं कि अन्त येशूको नाममा आयो।
स्वर्गको अधिकार द्वारा पिता, तपाईं मेडिकल चिकित्सकहरु को समझ को ज्ञान दिनुहुन्छ कि येशू को नाम मा निको गर्न को लागी उनीहरुलाई।
अन्तमा, हामी प्रार्थना गर्दछौं, २ इतिहास :2:१:7 को पुस्तकले यदि मेरा मानिसहरू, जसलाई मेरो नामले चिनिन्छ तिनीहरू विनम्र हुन्छन् र प्रार्थना गर्छन् र मेरो अनुहार खोज्छन् र तिनीहरूका दुष्‍ट चालबाट फर्कन्छन भने, तब म स्वर्गबाट ​​तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका देशलाई निको पार्नेछु। हामी तिम्रा मानिसहरू रगतले मोल तिरेका छौं र हामी तिम्रो नामको निम्ति बोलाउँदछौं, हामी तपाईलाई हाम्रो पाप र अधर्म क्षमा माग्दछौं। हाम्रो भूमि उथलपुथलमा छ, पीडा, डर, र मृत्युले घातक कोरोनाभाइरसको कारणले तपाईंको जनतालाई पर्याप्त क्षति पुर्‍याएको छ, हामी तपाईंलाई तपाईको प्रार्थना स्वर्गको स्वर्गबाट ​​सुन्नेछौं र तपाईको दाहिने हातको बलले तपाईले सुन्नुहुनेछ रोगबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहोस्, हामी तपाईलाई बिन्ती गर्दछौं कि तपाईले पीडितहरुलाई निको पार्नुहुनेछ र तपाईले सयौं अरबौं लाई बचाउनु हुनेछ जुन संक्रमित छैन, येशूको नाममा। आमेन
अघिल्लो लेखमास्ट्रेंगट र कम्फर्टको लागि प्रार्थना
अर्को लेखमासुरक्षा र रक्षाको लागि भजन २ Pray प्रार्थना
मरियम मार्च 16, 2020 8 मा: 04 बिहान
म धेरै आभारी छु, वास्तवमा परमेश्वरलाई Al / xvbnm को रूपमा हेर्ने समय आएको छ
Bienvenu Fonkouo मार्च 17, 2020 8 मा: 52 बिहान
कोरोनाभाइरस सम्बन्धी यस शक्तिशाली र प्रार्थना पोइन्टको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जसले यस समयमा संसारलाई असर गरिरहेको छ। तपाईंको शक्तिशाली प्रार्थना पोइन्टहरूको लागि ईश्वरले तपाईंलाई प्रशस्त मात्रामा म्यानका लागि आशीर्वाद दिऊन्
Cece मार्च 28, 20207मा: 34 बिहान
म यस कोरोनाभाइरस र हाम्रो भूमिमा अन्धकारको कुनै पनि प्रकारको बिरूद्ध प्रार्थना गर्न विश्वासीहरुसंग मेरो विश्वासमा सामेल छु। म तिम्रो प्रार्थनाको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु
डाफेन मार्च,, २०२० साँझ :29::2020
यस प्रार्थना पोइन्टको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। म संयुक्त राज्य अमेरिका बाट धेरै शक्तिशाली प्रार्थना हो
युलियस जुनैदी मार्च 31, 20204मा: 01 बिहान
trimakasiH Poin doax…।
तुहान हौंस सदस्य
डेन सिया इन्गिन मेम्बागी डि डेरा सेआ बन्याक युग बेर्केडोक मेनजादी पेन्डोआ।टापी माईरेका जुगा मसिह बन्याक प्याक डिग्ने गेराकान इब्लिस एट्यू फौज।
बगैमाना कारा अनटुक मेघन्चुरकान सैन्य दल
ओगोमा अप्रिल १,, २०२० बिहान :3:१
धन्यबाद येशू, वास्तवमै सकियो !!!
मरियम अप्रिल १,, २०२० बिहान :7:१
धन्यबाद यी मन्त्रालयका लागि धन्यबाद येशु जसले तपाईको वचनले हामीलाई समृद्ध बनाउनुहुन्छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। भगवानले यो मन्त्रालयलाई उच्च स्थानमा धकेल्नुहुनेछ।
असुरक्षित पत्नीहरूको लागि शक्तिशाली प्रार्थनाहरू
Pre० पूर्व सेवा प्रार्थना पोइन्टहरू
विवाहको तयारीको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू